သင်၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iTunes မှသင်၏စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်နည်း | အိုင်ဖုန်းသတင်း
ယေရှုဖြတ်တောက်တယ် | | သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီတွင်အနည်းဆုံးတက်ကြွစွာပါဝင်သည်ကိုယနေ့တွေ့နေကျဖြစ်သည် ကြေးပေးသွင်း လျှောက်လွှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းသို့။ လျှောက်လွှာများပိုများလာသည် Freemium ဝန်ဆောင်မှု သူတို့အလုပ်အကိုင်မှအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်။ လစဉ်လတိုင်းသင်ပေးသောထိုလျှောက်လွှာကိုသင်ပယ်ဖျက်ရန်မလိုအပ်တော့ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်၎င်းကိုမည်သို့နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်ပြမည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ အက်ပ်များသို့မဟုတ်ဂိမ်းများ Freemium, Nintendo ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ, ကျွန်ုပ်တို့လုံးဝဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့်အရာများကိုရည်ညွှန်းသည် အခမဲ့ App Store မှသာမန်အားဖြင့်သုံးပါ၊ သို့သော်အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုများကိုလည်းပေးသည် လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ငွေပေးချေမှု.
လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပါက၎င်းသည်အလွန်ဖြစ်နိုင်ပြီးအမှန်မှာ၎င်းတို့သည်များစွာသောသူတို့နှင့်တူသည်၊ သင်အလွန်ဈေးကြီးပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအားသွင်းနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုတော့သောသို့မဟုတ်မလိုချင်သောအရာအတွက်တရားစွဲဆိုခံရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နေသော subscription များအားလုံးကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်ပယ်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ iOS ကိရိယာ၊ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်ဒုတိယရွေးစရာတစ်ခုသည် iTunes မှပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
1 iPhone သို့မဟုတ် iPad မှစာရင်းသွင်းမှုများကိုပယ်ဖျက်ပါ
2 iTunes မှကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပါ
iPhone သို့မဟုတ် iPad မှစာရင်းသွင်းမှုများကိုပယ်ဖျက်ပါ
သိသာထင်ရှားတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအရာ«ဖြေရှင်းရန်ပါလိမ့်မည်setting များကို»ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှ။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုင်း«ကိုရိုက်ထည့်ရမည်။iTunes နှင့် App Store»ပြီးတော့အဲဒီမှာငါတို့အထဲသို့ဝင် Apple ID။ ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါလိမ့်မယ် ရဲ့ login ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအတည်ပြုရန်။
ပြီးတာနဲ့အတွင်း, ငါတို့က option ကိုရှာ«subscriptions ကို»ထိုအခါငါတို့ကဝင်ကြ၏။ စာရင်းရှိကျွန်ုပ်တို့တက်ကြွစွာ subscriptions တစ်ခုစီနှင့်အတူပေါ်လာသင့်သည်။
ဒါဟာအလှည့်ပါ cancel ငါတို့မလိုချင်တဲ့တစ်ခု ၎င်းကိုနှိပ်လိုက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်ဝင်ပါလိမ့်မည် စာရင်းသွင်းအသေးစိတ်ကို, subscription အမျိုးအစား, စျေးနှုန်းနှင့်ထို option စာရင်းပေးသွင်းရန်.
ဤခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်လိုက်ပါကကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်ကိုအတည်ပြုရန်သတိပေးစာတစ်ခုပေါ်လာမည် ဖျက်သိမ်းကဆိုသည်။ အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ။ မျက်လုံး ကျနော်တို့ကဖျက်သိမ်းသည့်အခါကြေးပေးသွင်းအဆုံးသတ်မထားဘူးဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ ၎င်းကို ၃၀ ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန်စီစဉ်ထားပြီး၊ ယနေ့တွင် ၁၅ ခုမြောက်ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသက်တမ်းတိုးမည့်နေ့မတိုင်မီအထိခံစားရမည်။
ပြီးတာနဲ့လျှောက်လွှာအတွင်းပိုင်း iTunes ကကွန်ပျူတာမှဖြစ်စေ Mac မှဖြစ်စေ menu ထဲရှိ option သို့သွားရမည်။အကောင့် -> ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုကြည့်ပါ"။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုရေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါလိမ့်မယ် စကားဝှက်ကို ကျွန်တော်တို့၏ Apple ID ပြီးတော့ငါတို့ဒီအချက်အလက်အားလုံးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။
ပေါ်လာသောကွဲပြားခြားနားသောကဏ္များအဆုံးတွင်အဆုံးသတ်နီးပါးတွင်ရှိသည့်အပိုင်းရှိ setting များကိုရွေးချယ်စရာ«subscriptions ကို»၎င်းဘေးတွင်၎င်းအတွက်«ခလုတ်တစ်ခုစီမံခန့်ခွဲ"။
ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့စာရင်းတစ်ခုလုံးကိုမြင်လိမ့်မည် တက်ကြွခြင်းနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံး subscriptions ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Apple ID နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ် «ကိုနှိပ်ပါ။ပြင်ဆင်ရန်»ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမြင်တွေ့နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
သင်တစ်ကြိမ်မှတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် သင့်ရဲ့ subscriptions ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အလွန်နိမ့်စျေးနှုန်းများ ကျွန်တော်တို့မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလတွေ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » သင်၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iTunes မှသင်၏စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်နည်း
Mara Garcia ဟုသူကပြောသည်
ငါမပြုလုပ်သော iTunes တွင်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုယူပါသည်၊ ပယ်ဖျက်လိုသည်၊ ကျွန်ုပ်မသုံးပါ။
Mara Garcia သို့စာပြန်ပါ
Benigno Marín Calvo ဟုသူကပြောသည်
သငျသညျအကြှနျုပျကိုအပြည့်အဝကရှင်းပြခဲ့ကြပါပြီ, ဒီစာမျက်နှာကိုကျေးဇူးတင်ငါစာရင်းသွင်းခြင်းကနေစာရင်းသွင်းရန်နိုင်ခဲ့ပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Benigno Marín Calvo အားပြန်ပြောပါ
ဤအပလီကေးရှင်းဖြင့် Google Assistant ကိုသင်၏ Android စမတ်ဖုန်းနှင့် AirPods ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
အက်ပဲလ်ရဲ့ကြော်ငြာစက်က iPhone X ကိုကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေမှာထိုးတယ်